Dad: Ka dib markay Leaving Neverland, qoyska Michael Jackson waxay sameeyaan dukumintigooda si ay u difaacaan - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Dad: Ka dib markii Leaving Neverland, qoyska Michael Jackson wuxuu sameeyaa dukumenti u gaar ah oo isaga difaacaya
Dad: Ka dib markii Leaving Neverland, qoyska Michael Jackson wuxuu sameeyaa dukumenti u gaar ah oo isaga difaacaya
Wanda Dadka, ayaa la bilaabay! Dhowr usbuuc ka dib markii la sii daayay ee Mareykanka oo ka mid ah Leaving Document Never, kaas oo gacan ka gaystay inuu wiiqo sawirka Michael Jackson ee indhaha dadweynaha guud ahaan, qoyskiisu wuxuu ku yaallaa indho la '. Boqorka Pop ee qaraabada ayaa doortay in ay sameeyaan dokumentigooda si ay u difaacaan. Isku duubashada! Kooxda Wanda ayaa kuu sharraxaysa.
Wali ma seegi kartid Wandayante Wanda Peeps. Waqtigaan ka hor, waxaa laga sii daayay HBO iyo M6 muran ka dhashay " Laga tago Neverland ", A documentary culus oo codka siinaya laba dhibbanayaal lagu soo oogay Boqorka Pop, Wade Robson iyo James Safechuck, kuwaas oo si cad uga sheekaynaya weerarka galmada ay noqon lahaayeen dhibbanayaal yaryar.
Inkastoo taageerayaasha badani Michael Jackson sii wadaan in ay ku dhawaaqaan inaan waxba galabsan ee ay sanamkoodu iyo in Shaki wuxuu ku dhagan yahay markhaatiyadiisa eedeymaha, qoyskii turjumaanka "Thriller" ayaa go'aansaday inuu ciyaaro xaqiisa jawaabta isagoo sii daayay dokumentigiisa, Hoha!
cinwaanka Neverland Firsthand: Baaritaanka Muuqaalka Michael Jackson oo uu sii daayay 30 bishii Maarso ee la soo dhaafay ee YouTube, filimku wuxuu soconayaa daqiiqado 30 oo dib u habaynaya eedeymaha galmada ee "Leaving Neverland". Taj iyo Brandi Jackson, oo adeer iyo aabihii King of Pop, ama agaasimihii hore ee farsamada, Brad Sundberg, ayaa ka mid ah kuwa ku hadlaya buugan yar-yar.
"Milyan sano ka hor, waxaan ku arkay Michael Jackson ilmo u muuqday in uu dhibsanayo, waxyeelo u geysanayo, loo geystay"Ayuu yiri Brad Sundberg wareysi uu la leeyahay Liam McEwan, oo lagu daray filimka. Iyo in ay sii wadaan: "Neverland wuxuu ahaa meel nabad ah, ammaan ah iyo meel xiiso leh."
Taj Jackson ayaa sidoo kale sheegay in adeerkiis "ku noolaa wakiil"Carruur ahaan maxaa yeelay isagu qudhiisa ma uusan laheyn carruurnimo. Wuxuu si gaar ah u sharaxayaa in ereyada gacmaha ee jacaylka ay soo bandhigeen labadan eedeeysani ay ahaayeen xaqiiqooyin yar oo dhiirigelin ah. Xusuusin isaga iyo walaalihiis ayaa sidoo kale helay iyo in Michael Jackson saxiixay "Uncle Doo Doo".
Brandi Jackson ugu dambeyntii waxay ka hadlaysaa kulankeeda Wade Robson, mid ka mid ah eedeeyayaasha adeerkiis oo ay ku sii jirtey xiriirka sanadaha 7. Xiriir aan la sheegin "Leaving Neverland" sababtoo ah sida uu qabo " waxay noqon lahayd mid la yaab leh oo dhan eedeymaha ". Waxay sheegaysaa in dambe " wuxuu had iyo jeer ahaa waxoogaa fursado ah ". Sida laga soo xigtay isaga, wuxuu ka dhigay eedeymahan dadweynaha si loo helo faa'iidooyin lacageed. " Wuxuu ogyahay sida loola macaamilo xaalado kala duwan oo ka faa'iideysan doona aragtida maaliyadeed ", Ka dibna waxay u soo baxday dokumenteriga.
Hum Wanda Dadkan oo dhan, kalsoonidii Leaving Neverland waxay qaadataa wax weyn. Sidaa daraadeed dadku waxay rabeen inay naga dhigaan bacda sidaa daraadeed? Si kastaba ha ahaatee, waxaan ku soo dhaweyneynaa kaliya midnimada qaraabada qaar ee Michael Jackson, oo ka soo horjeeda dabaylaha iyo hareeraha isku dayaya in ay maydho sharaftiisa. Dhammaan walaashiis Janet Jackson weli ma maareyn !
Fikrad naftaada ku samee qoraalka hoose.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.jewanda-magazine.com/2019/04/people-apres-leaving-neverland-la-famille-de-michael-jackson-realise-son-propre-documentaire-pour-le-defendre/
Celine Dion oo la yaabtay lammaaneyaasha isqaba ee Las Vegas!